Web igama lesizinda revolution babekwazi hit lokuhweba ukuzivikela - Izindaba Rule
Web igama lesizinda revolution babekwazi hit lokuhweba ukuzivikela
Domain Name Izandiso (Photo credit: The Booklight)
Ukwanda mass amagama domain Internet angabangela umonakalo omkhulu ukuvikela zokuthengisa Internet, the A okwenziwe ngenqondo umzimba waxwayisa ngoMsombuluko.
“Sine lokhu kwanda amangalisayo kwenzekani,” Said Francis Gurry, ikhanda lika-World Intellectual Property Organization (WIPO), okuyinto yengamela imithetho somhlaba wonke sokumelana cybersquatting.
“Lokho uya ukuba nomthelela, okuyinto cishe ukuba kungathiwa zibalulekile, ukuvikelwa lokuhweba. I siyini ngempela umthelela, singaqiniseki of ngalesi sigaba, kodwa kungenzeka ukuba kungathiwa zibalulekile futhi baphazamise,” Gurry etshela izintatheli.
“abanikazi Uphawu lohwebo bakhathazekile kakhulu ngomonakalo owenziwa lokhu kwanda ziyoba sokubekisa izinhlelo,” wanezela.
Ukuvula i-Internet ukuze amagama domain ukuthi ahambe ngalé zabuna ezifana Play, .org, .net, .gov, futhi .edu iye owamenyezelwa US-based Web overlords Internet Corporation lokunikezela amagama nezinombolo (ICANN) njengoba ushintsho olukhulu Web njengoba lenziwa.
Sekuyisikhathi eside kwakunabaFarisi nje 22 abajwayelekile zizinda top-level (gTLDs), okuyinto .com futhi .net zimumethe share sengonyama.
Kodwa ICANN California-based akushilo ukuthi snowballing of the Internet — nabasebenzisi ezibalelwa ezigidini eziyizinkulungwane ezimbili emhlabeni jikelele, kwesigamu kubo Asia — kwenza amagama amasha abalulekile.
Around 1,400 gTLDs ezintsha ziya ngokuya ngokuya wafaka engatholwa, zokuqala 160 kakade waphathisa ahlukahlukene ukubhaliswa Web amafemu.
“Ithuba ngokulusebenzisa kabi zokuhweba andisa exponentially,” wathi Gurry, siphawula ukuthi nokubhalisa igama lesizinda is a cheap, Inqubo okuzenzakalelayo esithatha indaba ngemizuzwana futhi akanawo lemifanekiso ahlole ukuthi kukhona izingxabano lokuhweba.
“Lokho kuletha ngokuphazamisa isikhonzi umthwalo enkulu kakhulu ukubhekwa on the ingxenye abanikazi lokuhweba,” uthe.
In the mix kokuqala, wavula ngo-January, amakheli ophela in guru, bike, ibalula, kanye izingubo, Holdings, amapayipi kanye Ezenziwa.
Amanye amagama ojwayelekile emkhathizwe zihlanganisa .football, .izindiza, .amakhadi kanye .bid.
I yokuqala ngqa non-Latin incwadi ezizindeni aye ivume, kuhlanganise Chinese “game”, Arabhu for “web” noma “inethiwekhi,” noma Cyrillic for “online”.
– Ukukhathazeka 'side effect’ –
Gurry wavuma ukuthi ukunwetshwa kwakudaliwe adambise ukusetshenziswa kwe-Internet elikhula.
“Ngakho mhlawumbe, izizathu zabo ukunweba ezihlobana ngayo ngcono wekhono olwandle on the Internet. Lokho esikwenzile ukhathazekile luluhlangothi umphumela nomthelela wokuthi ukuthi unakho on uphawu ngensimbi eshisayo izinhlelo eziyingozi ezisetshenziswa yilo kubathengi nokuxhumana kwabo nge commerce,” wanezela.
abanikazi Uphawu lohwebo onesikhalo cybersquatting — nokubhaliswa kabi amagama domain, ngezinye izikhathi ukuze ukuzidayisa emuva bamalungelo noma udwebe abathengi angi imikhiqizo — zithole ithuba baphendukele inqubo ukulamula umbango WIPO sika.
In 2013, 2,585 Ezimweni ezinjalo kwakucatshangwa ukuthi bafaka WIPO, ngokuphathelene irekhodi 6,191 amagama domain ngamunye.
Ngaphansi imithetho yamazwe ngamazwe, ukubhaliswa Web amafemu kumele ize ukubhaliswa kwesikhungo losers e WIPO izimo cybersquatting.
Isidumbu UN isivele kokuzwa icala walo wokuqala mayelana gTLD entsha, ahanjiswe February bese pitting inkampani yaseJalimane ngokumelene registree Dutch of the namanje-abapholile website canyon.bike.
Erik Wilbers, Umqondisi noma WIPO sika ukulamula umbango ingalo, uthe ukwanda enkulukazi of gTLDs kuyosho ukuthi abaphathi lokuhweba kuyodingeka “ngco nekuphindze ubasite ekuhlanganiseni nokunye okuningi” kulokho inselelo.
“Awukwazi ukugcina sokudubula konke okuhamba in an ekwandiseni igama lesizinda system,” uthe.
20536	0 Cybersquatting, Igama Domain, Francis Gurry, IsiZulu top-level domain, ICANN, Uniform Domain Name-Ingxabano-Resolution yemfihlo, WIPO, World Intellectual Property Organization
← Ithuluzi New ukulwa nokukhwabanisa ECrimea usho wokuzikhulula ekubuseni Ukraine →